हामीलाई हेप्ने ? विधेयकमा कहाँ बसेर छलफल गर्ने हो ? गगन थापाको प्रश्न - Sero Fero News
Home/मुख्य समाचार/हामीलाई हेप्ने ? विधेयकमा कहाँ बसेर छलफल गर्ने हो ? गगन थापाको प्रश्न
हामीलाई हेप्ने ? विधेयकमा कहाँ बसेर छलफल गर्ने हो ? गगन थापाको प्रश्न
January 9, 2020	मुख्य समाचार Leaveacomment3Views
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्ने आँट नभएपछि जनताको मुख थुन्‍न सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले बिहीबार विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले काम गरेर मुख बन्द गर्ने आँट नभएपछि विधेयक ल्याएर तर्साउन खोजिएको दाबी गरे ।
“यो रातारात आएको होइन प्रधानमन्त्री बलियो भएर आएको होइन । प्रधानमन्त्री लुते भएर आएको हो । प्रधानमन्त्री कायर भएर आएको हो,” उनले भने, “उहाँलाई आलोचना गरेको सहन सक्नुहुन्न । म काम गरेर उत्तर दिन्छु । आलोचना गर्नेहरुका मुख म काम र परिणामले बन्द गर्दिन्छु भन्ने हिम्मत नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग रहेन ।”
उनले संसदीय समितिले कांग्रेसको असहमतिका बीच पारित गरिसकेको विधेयकले प्रतिनिधसभाबाट पारित भएर कानुनी मान्यता पाए जनताका संविधान प्रदत्त हक, अधिकार खोसिने नेता थापाको भनाइ थियो । विधेयक पारित भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता–कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै लेख्ने र बोल्ने अधिकार हुने उनले बताए ।
“यो विधेयक पारित भएपछि लेख्न पाउने, सोध्न पाउने हक कल्लाई मात्र रहन्छ ?,” नेता थापाले भने, “सरकार संरक्षित अरिंगालहरुलाई मात्र रहन्छ ।” उनले संसदमा संख्याका हिसाबले थोरै भए पनि कांग्रेसले विधेयकका विरुद्धमा लड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
“यो कानुन कसले रोक्ने ? हामी संसद्मा थोरै छौं । उनीहरुसँग संख्याको ताकत छ,” थापाले भने, “तर पनि हामी लड्छौ । संख्याको तकतलाई रोक्न सडकको ताकत आवश्यक छ ।”
नेता थापाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई विधेयकका धारा र दफामा छलफलका लागि तयार हुन चुनौतीसमेत दिए । केही दिनअघि मन्त्री बास्कोटाले विधेयक अध्ययन नै नगरेर विरोध गरेको आरोप लगाएपछि उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।
“माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएछ- विधेयक नपढीकन आयो । यो विधेयकमा कहाँ छलफल गर्ने मन्त्रीजी ? सिंहदरबारमा गर्ने हो ? संसदमा गर्ने हो ? माइतीघरमा गर्ने हो कि तिम्रो कार्यालय धुम्बाराहीमा गर्ने हो ?,” मन्त्री बास्कोटालाई छलफलका लागि चुनौती दिँदै उनले भने, “प्रत्येक दफादफा-शब्दशब्दमा छलफल गर्न तयार छु । नपढीकन आएको होइन । पढेर बुझेर आएको हुँ । हेप्ने हाम्लाई नपढीकन आयो भन्ने ? हामीले बुझेर आएको हो । पढेर आएको हो ?”
Previous नेपालबाट चिनियाँ फर्काइएको चर्चा संसारभर
Next यस्ता छन् नेकपा सरकार आएपछिका ६ विवादास्पद विधेयक